Baarlamaankii Puntland oo waqtigii ka dhamaaday, Maxaase ka xasuustaa waxqabadkoodii? – Puntlandtimes
Baarlamaankii Puntland oo waqtigii ka dhamaaday, Maxaase ka xasuustaa waxqabadkoodii?
GAROOWE(P-TIMES)- Si weyn ayaa isha loogu hayaa xulida xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Puntland, waxaana xalay saqdii dhexe ku e’ekaa mudo xileedka baarlamaankii hore oo dhamaaday shanti sanno ee ay talada dalka hayeen.
Baarlamaankii hore waxaa lagu xasuusan doonaa arrimo kala duwan oo ay kamid ahaayeen doorashadii Madaxda hadda mudo xileedkoodu dhamaanayo, Ansixintii Heshiiskii DP WORLD, Ceyrintii Xukuumadd dhan oo dhisan, taas oo ay bilaa sabab ku rideen, qaadashada lacag ka badan 2 Malyan oo Dollar, taas oo ay ku qaateen meelmarinta Heshiisyo lasoo galay.
Dadka dhiilaa waxay ugu yeeraan baarlamaankii ugu la xisaabtam yaraa ee soo mara mandiqada Puntland, halka kuwa taageersana ay ku sheegaan baarlamaankii ugu horeeyey ee awood ula soo baxa Xukuumadda iyo guddiyadeeda gaarka ah.
Sidaas oo kale waxyaabaha lagu xasuusto waxaa kamid ahaa in ay sannadkii ugu horeeyey xil-heyntooda meesha ka saareen Gudoomiyihii ay doorteen horaantii sannadkii 2014-kii, kaas oo ahaa Siciid Xassan Shire, ka dib markii xagga Xukuumadda ay u aragtay joogitaanka gudoomiyahaas ee golaha mid dhib ku ah dhankooda.
Waxyaabaha kale ee xasuusta galaya waxaa kamid ah in ay yeelan waayeen kalfadhigii ugu dambeeyey oo ay ahayd in uu furmo bishii October ee laga soo gudbay, waxaana muuqatay in ay aad ugu kala qeybsameen arrimaha doorashooyinka hadda taagan.
Mooshin ku aadan furitaanka Dastuurka iyo kordhinta baarlamaanka ayaa kamid ah arrimaha lagu xasuusan doono, waxaana golahan ay wajahayeen dhaliilo iyo taageerid kala duwan oo uga imaanaysa dhinacyada kala duwan.
Ka sokow arrimahaas oo dhan baarlamaankaas ayaa waqtigiisii qaatay, waxaana hadda isha lagu hayaa dhaqdhaqaaqyada xooga badan ee xulida baarlamaanka cusub, waxaana geesaha ka eegaya dhinacyada oo ay shacabku ugu horeeyaan, arrimaha ugu waa weyn ee laga filanayo waxaa kamid ah in ay doortaan madax u nacda dalkan.